Atụmatụ | Otu Di na Nwunye
August 7, 2019 + Okpughari, Njem Gear, Nhazi njem
10 dị mkpa Ga-enwerịrị ịkwakọ maka njem
Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị njem ụgbọ mmiri tupu oge ahụ, ị ​​nọ n'ezie maka ọgwụgwọ. Iweputa oge iji zuru ike na otu n’ime ebe a na-ese mmiri abụghị nanị nnukwu ụzọ iji wepu ụwa, mana ọmarịcha ụzọ iji nọrọ oge na-atọ ụfọdụ n’ime ọmarịcha ogige a mara mma. Tupu ị gawa, agbanyeghị, ọ dị oke mkpa na ị nọtụ oge… GỤKWUO
June 4, 2017 + ụlọ, Hotels, Mexico, Obere-Blog, North America, Nyocha, Nhazi njem
Nyochaa: Hotel Valladolid Maria De La Luz na Yucatan, Mexico
Na njem na mpaghara Yucatan, ndị mara mma, nri, omenala na akụkọ ihe mere eme nke mpaghara ahụ kpaliri anyị. Site na Chichen Itza na Ek Balam na Tulum, anyị nwere ọtụtụ ihe mepere emepe Mayan nke wuru n'elu njem njem mmiri na-adabere na Valladolid - obodo Yucatan nke dị na ya bụ nke anyị ji hụ ịhụnanya n'anya. Nke a bụ ihe niile ... GỤKWUO
April 23, 2017 + Di na Nwunye, Self Improvement, Njem ịde blọgụ
Nchịkọta Njem - Ihe Ị Ga-achọ na Mbụ Ọnwa ole na ole
Nke a blog bụ ihe sitere na echiche nke malitere ihe karịrị otu afọ gara aga, yana dịka ọtụtụ n'ime ndị edemede ibe gị, ọ bụ mgbanwe mberede na ndụ anyị nke mere ka echiche ahụ pụta ìhè. Anyị enweghị echiche ọ bụla esi amalite bọmbụ njem, enweghị ezi echiche banyere ihe ọ gụnyere, anyị malitere n'ụzọ ụfọdụ. N'oge ahụ, arụrụ m ọrụ ruo afọ iri iji ... GỤKWUO
January 7, 2017 + Backpacking, Di na Nwunye, Njem Ụmụaka, Njem Gear, Nhazi njem
Atụmatụ Maka Akpa Oge Backpackers
Anyị enyela ndụmọdụ ndị a maka oge mbụ backpackers iji mee ka ị mara na "backpacking" adịghị mkpa ịkọwa ahụmahụ njem siri ike ma sie ike. Backpacking, ikwu okwu n'ezoghị ọnụ, pụtara n'ezie ịmara ihe ị na-etinye na ohere mgbakọ, yana ịchekwa ego! Backpacking na-ejikarị echiche ezighi ezi na ọ bụ ihe dị njọ mgbe ị na-aga ụlọ mbikọ gaa ụlọ mbikọ, mgbe ... GỤKWUO